Nzira shanu dzeRuzhinji Rwehukama Nyanzvi dzekuvandudza maPaki avo | Martech Zone
5 Nzira dzeRuzhinji Rwehukama Nyanzvi dzekunatsiridza maPaki avo
Chipiri, Kurume 8, 2016 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Douglas Karr
Kuita iwe pachako kunowedzera shanduko mitengo. Iyo haisi dzidziso, kugona kwemunhu yakaratidzwa kakawanda. Kana iwe uri wehukama neruzhinji nyanzvi, yako kutendeuka ndiko kugona kwako kuve nemushambadziro kana kufurira kugovana yako mutengi nyaya kana chiitiko. Zvinongonzwisisika kuti hunhu hunobatsira shanduko, asi nyanzvi dzichiramba dzichiparadza hukama hwadzo (rangarira… ndiyo R muPR) ine batch uye blast masisitimu nemaitiro.
Takanyora uye takagovana maitiro ekumisa blogger pamberi. Isu takagovanawo sei ASI kukanda blogger. Uye munzira, takagovana maturusi ekushambadzira anobatsira Nyanzvi dzeRuzhinji Hukama kuchengetedza avo vanotaura navo uye kuita basa riri nani rekuvaka hukama navo. Zano: Izvo hazvisi kuvaka cheesy email iyo inovhura kuti wanga uri wenguva-refu fan, iyo iwe uchangobva kuverenga ____ post, uye iwe ungade kugovera ruzivo nezve yako mutengi. #yawn
New tsvagiridzo kubva kuCision inonongedza nzvimbo dzinowanikwa nehukama neruzhinji inoda kuvandudza on:
79% yeavo vanopesvedzera vanoda PR nyanzvi kuti vagadzire mapaki anokodzera kufukidza kwavo
77% yevanopesvedzera vanoda PR nyanzvi kuti vanzwisise zvirinani nzvimbo yavo.
42% yevanopesvedzera vanoda PR nyanzvi kupa ruzivo uye nyanzvi zviwanikwa.
35% yevanopesvedzera vanoda PR nyanzvi kuti varemekedze zvavanoda, izvo 93% vanofarira email.
Zvichida zvakanyanya kukosha ndezvekuti 54% yevatapi venhau vanoteedzera yakadzvanywa nyaya nekuda kwehuwandu hwakazara hwakabatanidzwa muchigadzirwa, chiitiko kana musoro wenyaya. Unhu hwakakosha! Imwe chete mirau yandineta nayo pamushumo wese ndeyekuti kuburitswa kwemapepanhau kuchiri kuonekwa sekukosha kuvatori venhau. Ndinofunga ndicho
Verenga iyo State yeMedia 2016 kubva kuCision
Isu tinodzikwa zuva rese Martech Zone uye ini ndine mashoma ehunyanzvi ePR anogara aine nzeve yangu nekuti ivo vanoremekedza nguva yangu pavanokanda nyaya. Imwe chete mirau yandineta nayo pamushumo wese ndeyekuti kuburitswa kwemapepanhau kuchiri kuonekwa sekukosha kuvatori venhau. Ini ndinofunga ndiyo tsananguro isina kujeka zvachose. Ini handina basa nekuti ndeyekuburitswa kana nyaya yakanyorwa zvakanaka… asi ini handitsvage kuburitswa uye handina kwenguva refu.
Tags: 2016cisioninfographicpitcheskudzikaprhukama hwevanhunzvimbo dzehukama neruzhinjimamiriro enhau